Hello Nepal News » अनुसन्धान भन्छ– माघमा जन्मेका मानिसको प्रेम सफल हुँदैन !
अनुसन्धान भन्छ– माघमा जन्मेका मानिसको प्रेम सफल हुँदैन !
ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउने मानिसहरू धेरै हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधिलाई मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ ।
को मान्छे कुन महिना, कुन बार तथा कति बेला जन्मेका हो उक्त साइतले उसको स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरूले बताउँदै आएका छन् । एक वर्षमा १२ महिना हुने गर्छ । त्यसका अनुसार हरेक मानिसहरूको आफ्नो फरक जन्म महिना रहेको हुन्छ । र, त्यही जन्म महिनाअनुसार व्यक्तिहरुको फरक फरक विशेषता हुने गर्छ ।
हिन्दू क्यालेन्डरमा महिनाको नाम नक्षत्रको आधारमा राखिएको छ । यो महिना जन्मेको मानिस यस्तो हुन्छ भनेर त कसैलाइ पनि थाहा हुँदैन तर, विभिन्न ज्योतिषहरूले बताएअनुसार उनीहरूका केही कुराहरू भने मिल्ने गरेको पाइन्छ ।
माघ महिनामा जन्मिने व्यक्तिहरू एकदम वुद्धिमान, धनवान, निडर र निष्ठुर बचन बोल्ने खालका हुन्छन् । उनीहरू अरुको सहयोग गर्ने, नआएको कुरा सिकाउनेभन्दा पनि आफूलाई सबै कुरा आउने हुँदा घमण्डी स्वभावका हुन्छन् ।
उनीहरूको दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । उनीहरू एकदम रमाइलो गर्ने, पार्टी गर्ने तथा रमाउने प्रवृतिका हुन्छन् । माघमा जन्मेका मानिसहरू फेमस हुने खालका हुन्छन् । माघमा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् ।
सरल र सहज स्वभावका भएपनि अलि जिद्दी स्वभाव र आफूले भनेको कुरा पूरा नगर्ने स्वभावका हुन्छन् । माघमा जन्मेका मानिसहरू प्रेममा असफल हुने गर्छन् । यो महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई अनिन्द्रा तथा मस्तिष्कसम्बन्धी समस्याले सताउने गर्छ ।
प्रकाशित मिति २८ माघ २०७६, मंगलवार ०३:०५